Mugabe, Grace warm up to Mnangagwa rule - Weekly Xposé
29/07/2018:Zimbabwe,Harare. Grace Mugabe with her husband, former president Robert Mugabe after held a press conference at his Blue Roof residence.746 Picture: Matthews Baloyi/AFrican News Agency (ANA)
HARARE, September 7 ‑ Relations seem to be thawing between Zimbabwe’s former leader Robert Mugabe and his successor Emmerson Mnangagwa, with the former calling for unity of purpose.
Mugabe called for tolerance, saying the opposition must be allowed to do it’s politics within the confines of the law.
A day before the July 30 elections, Mugabe told the media that he was not going vote for Mnangagwa because he had tormented him. (ANA)
Tagged Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe, Sidney Sekeramayi, Zimbabwe
PRETORIA, June 1– The South African police on Thursday warned against the growing trend of false posts on social media about missing and abducted women and children, saying this caused panic in communities. Shops belonging to foreigners were looted in deadly violence in KwaMashu in KwaZulu-Natal this week after false reports spread on social media […]
Madibeng to appear before North West scopa over VBS Bank investment